How to Strategically Downsize Your Business? (Part – 1) ﻿
Downsizing - စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို လျှော့ချဖို့ပြုလုပ်ရခြင်းနဲ့ ရင်ဆိုင်ရတာဟာ လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်များအဖို့တော့ စိတ်ဖိစီးမှုအရဆုံးအလုပ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒီသို့ပြုလုပ်ရာတွင် ဆုံးရှုံးသွားရနိုင်တဲ့အရာများ များစွာရှိနေကြလို့ပါပဲ။ ကုမ္ပဏီအများစုအနေနဲ့တော့ ရေရှည်တွင်လုပ်ငန်းတစ်ခုဆက်လက်တည်တံ့နိုင်စေဖို့အတွက် (သို့) လုပ်ငန်းတစ်ခုရဲ့ တည်တံ့မှုကို ရေရှည်တွင် ထိခိုက်မှုရှိလာစေနိုင်တဲ့အခါမျိုးတွင် မလွှဲမရှောင်သာတော့တဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်လာမှသာ downsizing ပြုလုပ်ဖို့ကို စဉ်းစားတတ်ကြလေ့ရှိပါတယ်။
ဒါတင်မကသေးပဲ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဆိုသည်မှာ - “လစဉ်ပေးဆောင်ရမည့် ကုန်ကျစားရိတ်များနဲ့ အကောင်အထည်ဖော်ရမယ့်အိမ်မက်များရှိနေတဲ့ လူသားများနဲ့ဖွဲ့စည်းထားကြတာဖြစ်တဲ့အတွက် downsizing ပြုလုပ်လိုက်ခြင်းဟာ ဒီရည်မှန်းချက်တွေကို ကမောက်ကမဖြစ်သွားစေနိုင်ပြီး သင့်ရဲ့ဝန်ထမ်းများနဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအပေါ် ကြီးမားတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိလာစေနိုင်တာကိုလည်း သတိပြုသင့်ပါတယ်။”
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့သင့်အနေနဲ့ သယ်ဆောင်ထားရတဲ့တာဝန်များဟာလည်း ကြီးလေးမှာအမှန်ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် . . . ဒီအချက်တွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးနောက် သင့်လုပ်ငန်းဆက်လက်တည်မြဲမှုရှိစေနိုင်ရေးအတွက် မဖြစ်မနေ downsizing ပြုလုပ်ရတော့မယ်ဆိုပါကလည်း တတ်နိုင်သမျှထိခိုက်မှုအနည်းဆုံးဖြစ်စေမယ့် downsizing နည်းဗျူဟာများကို အသုံးပြုသင့်ပြီး ဒီကဲ့သို့ ပြုလုပ်ခြင်းကို strategic downsizing (နည်းဗျူဟာကျကျ downsizing ပြုလုပ်ခြင်း) ဟူ၍ ခေါ်ဆိုနိုင်ပါတယ်။
ယခုတစ်ပတ်ဆောင်းပါးလေးမှာတော့ www.jobsinyangon.com ကနေ ဒီအကြောင်းကို အပိုင်း (၂) ပိုင်းခွဲ၍ ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပြီး လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို downsizing ပြုလုပ်ရတဲ့အခါ ထိခိုက်မှုအနည်းဆုံးဖြစ်စေရန်အတွက် သတိပြုသင့်တဲ့အချက်များကို တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် လူကြီးမင်းတို့အနေနဲ့ စိတ်ဝင်စားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ စောင့်မျှော်ဖတ်ရှုပေးကြပါဦးလို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကို ဘယ်အချိန်မှာ downsizing ပြုလုပ်သင့်သလဲ?
သေချာရေရာမှုမရှိတဲ့အချိန်ကာလများတွင် downsizing ပြုလုပ်ခြင်းကို အတွေ့များလေ့ရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် - ၂၀၀၈ ခုနှစ် စီးပွားပျက်ကပ်နှင့် ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် COVID-19 ရောဂါပြန့်ပွားမှုအခြေအနေများကြောင့် ကုမ္ပဏီများစွာဟာ downsizing ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဒီလိုဘာကြောင့် downsizing ပြုလုပ်ကြရသလဲဆိုပါလျှင် - စီးပွားရေးအခြေအနေများ ဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းလာပြီး အခြေခံလူတန်းစားများတွင် ငွေပိုငွေလျှံရှိမှု ပိုမိုနည်းပါးသွားလို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချက်က တစ်ဖန်ပြန်လည်၍ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှ ထုတ်လုပ်/ ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ပြန်လည်ရိုက်ခတ်ကာ ဝယ်လိုအားလျော့ကျလာစေတဲ့အတွက် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအနေနဲ့လည်း ကုန်ကျစားရိတ်များကိုလျှော့ချနိုင်ဖို့လိုအပ်လာပါတော့တယ်။
ဒီကဲ့သို့သော အခြေအနေမှာ ကုန်ကျစားရိတ်များကိုလျှော့ချနိုင်ဖို့ အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုကတော့ လုပ်ငန်းတစ်ခုအတွင်းမှာရှိနေတဲ့ ဝန်ထမ်းအရေအတွက်ကိုလျှော့ချလိုက်ဖို့ပဲဖြစ်ပြီး ဒီနည်းလမ်းအားဖြင့် ကုန်ကျစားရိတ်များကိုလျှော့ချမှုပြုလုပ်ခြင်းမှပြန်လည်၍ရရှိနိုင်တဲ့ အားသာချက်တစ်ခုကတော့ လုပ်ငန်းများအနေနဲ့ စီးပွားရေးကျဆင်းမှုဖြစ်နေတဲ့ကာလကို ရင်ဆိုင်ကျော်ဖြတ်စဉ်တွင် ယခင်ကထက်သေးငယ်တဲ့ပမာဏဖြင့် လုပ်ငန်းစီးပွားရေးဆောင်ရွက်ချက်များကို ဆက်လက်လည်ပတ်နိုင်စွမ်းရှိနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဟာ ၎င်းတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုများဖြစ်တဲ့ မူပိုင်ခွင့်များ (သို့မဟုတ်) စက်ပစ္စည်းများကိုရောင်းချ၍ downsizing ပြုလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုပါက ဒီကဲ့သို့လုပ်ငန်းများကို ဆက်လက်၍ဖွင့်လှစ်ထားနိုင်စွမ်းရှိကြတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။
အထက်တွင်ဖော်ပြထားတဲ့အရာများဟာ သီအိုရီအရတော့မှန်ကန်မှုရှိနေပါတယ်။ သို့သော် . . . လက်တွေ့တွင် downsizing ပြုလုပ်လိုက်ခြင်းဟာ အမြတ်အစွန်းရရှိမှုကိုလည်းလျော့နည်းသွားစေနိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကာလတို-ငွေကြေးမလုံလောက်မှုပြဿနာများကို downsizing နည်းလမ်းဖြင့်ဖြေရှင်းလိုက်မိပါက ရေရှည်တွင် မိမိတို့လုပ်ငန်းရဲ့အမြတ်အစွန်းရရှိမှုကို ထိခိုက်မှုရှိလာစေနိုင်ပါတယ်။ ဒီအချက်ကြောင့်ပဲ ကုမ္ပဏီများဟာ မိမိတို့ရဲ့အမြတ်အစွန်းရရှိမှုနည်းပါးနေရခြင်းရဲ့အရင်းခံအကြောင်းအရင်းတွေကို ဖြေရှင်းမှုမပြုလုပ်နိုင်တော့ပဲ မကြာခဏ downsizing ပြုလုပ်နေရတဲ့ သံသရာထဲကနေပြန်လည်၍ရုန်းထွက်ဖို့ ခက်ခဲသွားနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် “downsizing ပြုလုပ်ခြင်းကို ဝယ်လိုအားကျဆင်းမှုဟာ အချိန်ကာလတစ်ခုအထိ ကြာမြင့်စွာဖြစ်လာနိုင်တဲ့ အခြေအနေမျိုးတွင်မှုဟာ ပြုလုပ်သင့်ပြီး။ မသေချာမရေရာတဲ့ အချိန်ကာလတစ်ခုဟာ ယာယီသာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ downsizing ပြုလုပ်မည့်အစား အခြားသောအစားထိုးဖြေရှင်းနိုင်မည့် နည်းလမ်းများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီး ဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်။”
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကို downsizing ပြုလုပ်မည့်အစား အစားထိုးဆောင်ရွက်နိုင်မည့်အရာများ
သင့်အနေနဲ့ downsizing မပြုလုပ်ဖို့ကို ရွေးချယ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တောင်မှ ဝယ်လိုအား (demand) လျော့နည်းနေတဲ့ကာလတစ်ခုအတွင်းတွင် သင်ကုန်ကျနေရတဲ့လုပ်အားခများကို လျှော့ချနိုင်မယ့်နည်းလမ်းများစွာ ရှိနေပါသေးတယ်။ ဒီအချက်များကိုသာ လိုက်ပါဆောင်ရွက်နိုင်ပါက သင့်လုပ်ငန်းအတွက် ရေရှည်တွင် ပိုမို၍အကျိုးရှိနိုင်ရုံသာမက အခြားသောအားသာချက်များကိုလည်း ရရှိနိုင်ဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာအားဖြင့် - “မိမိတို့ရဲ့ သဘောဆန္ဒအလျောက် လစာငွေလျော့ယူစေခြင်း” ဟာ သင့်ရဲ့လုပ်အားခအတွက် ကုန်ကျငွေကို ယာယီလျှော့ချနိုင်ဖို့ အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကဲ့သို့ ပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် downsizing ပြုလုပ်လိုက်တဲ့အခါတွင် မရရှိနိုင်တဲ့ “လူသိရှင်ကြား ထုတ်ဖော်ပြောဆိုရာတွင် ကောင်းမွန်တဲ့အမြင်ကိုလည်း ရရှိစေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။”
ထို့နည်းတူစွာ - “သင့်ရဲ့ဝန်ထမ်းများနဲ့ ပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးတိုင်ပင်မှုပြုလုပ်၍ ယာယီလစာငွေလျှော့ယူစေခြင်း” ဟာလည်း သင့်အနေနဲ့ ပြုလုပ်နိုင်တဲ့အချက်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ “ဝန်ထမ်းများအနေနဲ့ သူတို့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များဟာ အလုပ်ပြုတ်သွားနိုင်ချေရှိလာနိုင်တယ်ဆိုတာကို သိရှိရတဲ့အခါ အများစုဟာ အချိန်ကာလတစ်ခုအထိ အနည်းငယ်နည်းပါးတဲ့လစာငွေဖြင့် ဆက်လက်၍အလုပ်လုပ်ကိုင်ပေးလိုတဲ့ဆန္ဒရှိကြမှာဖြစ်ပါတယ်။”
ဒီအချက်က သင်နဲ့ သင့်ဝန်ထမ်းများအကြားတွင် ဆက်နွယ်မှုများရှိလာစေပြီး စည်းလုံးတဲ့စိတ်ဓါတ်ကို ဖော်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့အတွက် သင့်ရဲ့ employee retention (ဝန်ထမ်းများအလုပ်မှထွက်ခွာမှုနှုန်း) ကိုလည်းလျှော့ချပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အကယ်၍ဒီကဲ့သို့ပြုလုပ်ခြင်းဟာလည်းအလုပ်မဖြစ်သေးပဲ downsizing ပြုလုပ်ဖို့ဟာ သင့်လုပ်ငန်းအတွက် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ ယူဆထားရင်တော့ downsizing ကို နည်းဗျူဟာကျကျ ပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက် ပြုလုပ်သင့်သည့်အချက်များကို မနက်ဖန်မှာ စောင့်မျှော်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်လို့ပြောကြားရင်း နိဂုံးချုပ်လိုက်ပါရစေခင်ဗျာ။
ဒီ article လေးဟာ စာဖတ်သူပရိသတ်တို့အတွက် အကျိုးရှိစေလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်